रवि लामिछानेका ‘फ्यान’हरुलाई खुल्ला–पत्र - Baikalpikkhabar
रविले त्यस्ता मान्छेहरुको मात्र विषय मिडियामा ल्याउँछन्, जसले उनलाई भने जति पैसा तिर्न सक्दैनन्, जसको उनीसँग व्यक्तिगत दुश्मनी छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण आफ्नै ससुराले चलाएको अस्पतालको कथा हो। के त्यहाँ रवि चुइँक्क बोल्न सके ? कतिपय व्यक्ति र संस्थासँग पहिल्यै बार्गे्निङ गरेर मोटो रकम असल्नु उनको धन्दा पत्रकारित हो कि गुण्डागर्दी हो ? यतातिर तपाईहरुले सोच्नु पर्दैन ?
सुदुर खबर डट कम बाट
बुधबार, ०४ भदौ, २०७६, बिहानको ०७:५८ बजे